Free wezvokutengeserana sungano South Korea paachabvisa Danho
Goods nerubatsiro zvokutengeserana pakati China uye South Korea wakaisirwa munhu quantum achikwakuka mushure zvikuru-taitarisira akasununguka kutengeserana chibvumirano pakati penyika mbiri akayambuka inokosha zvemitemo Danho neMuvhuro. The National Assembly of South Korea akapa mitema chiedza kune bilateral kutengeserana chibvumirano B ...
Louisiana anotarisa kuti vavandudze yayo China tengeserana
Kufurira unyanzvi ari mafuta, zvemakemikari kugadzirwa uye achitarira mberi avhiyesheni uye Aerospace Louisiana anoda parlay ayo nesimba mafuta negasi uye kwemakemikari kugadzirwa kunyika rakawedzerwa zvokutengeserana ukama China, napaduku wacho pamusoro zvoupfumi mukuru. Don Pierson aiva ...
Mubayiro PTFE rinokwira crazily!
by pamusoro 18-05-28
Maererano dzakawanda upfumi mamiriro ezvinhu, mutengo PTFE amuka nokuda 30%, uye isu kufanotaura kubudikidza 60% muna 2017.We kunoratidza vatengi zvose worongedza annsual murayiro 2017 achangogara possible.It zvakunobatsira kwatiri kuti kugadzirwa urongwa, unganidza uye regai unonakidzwa mutengo 2016.
Global Tank Container muna 2017
The yose tangi mugaba rengarava unotora zvakawanda tangi mhando kusanganisira matangi kuti mvura, liquefied magasi, Nezvakakuyiwa, swap dzehondo uye Specials. Matangi pazasi 20ft urefu akadai avo zvakafanana nezvaiitwa vamwe pemvura mafuta indasitiri haana kuiswawo pakati Survey ichi. The tangi mudziyo zvikuru yaidzorwa uye ...
Maererano yemarudzi zveupfumi S ...